Ikholamu yePlastiki yeFormwork System |Zhongming Jixiang Construction Material Equipment Co., Ltd.
We help the world growing since 1998
Umsebenzi weForm, uKwenza iScaffolding kunye noMvelisi we-ACP kunye noThunyelo ngaphandle eTshayina ngaphezulu kweminyaka engama-20
Inkxaso ye-imeyile sales1@cn-zhongming.com sales6@cn-zhongming.com
Fowunela iNkxaso +86 158 6737 8966 +86 183 9586 8099
I-formwork yeplanga yeplanga
H Isakhelo scaffolding
U yintloko & Jack base
Adjustable Steel Prop
Iplanga (Catwalk) kunye nezitepsi
Iphaneli yeAluminiyam Composite
Iphaneli eqinileyo yeAluminiyam
Steel Frame Formwork System
Ikholamu yePlastiki yeFomwork System
Iphaneli yokuhlobisa i-Aluminiyam
Ukukhethwa kwesisombululo esisebenzayo sefomwork sisigqibo esibalulekileyo sokugcina ixesha kunye neendleko ngexesha lenkqubo yokwakha.ikholamu yeplastiki formworkiimveliso ziphucula ingeniso kwisiza sokwakha ngokuyintloko nokufaneleka kwazo ukunyuswa okukhawulezayo kunye nenkqubo yokwehliswa konga ixesha kwaye yenze ukuhamba komsebenzi kusebenze ngakumbi.Ngesi sizathu, izisombululo zethu zingasetyenziselwa izakhiwo, iindlela, iiprojekthi zeziseko zophuhliso, iibhankere, amadama okuqubha, okanye ukwakha yonke indlu eyenziwe ngaphambili. Ezi zilandelayo ziluncedoiplastic column formwork
Ubungakanani obuhlukeneyo beepaneli bunokutshixwa ngokuqinileyojika ngokulula izibambo ezikhethekileyo ukuya kwi-90 degree.Ipanels abe ubambo ngasemva, leyo eyenza iinkqubo akufuneki iibhloko iinkuni zemveli nezikhonkwane.Iipaneli zinemingxuma yokungena intonga yokubopha, isiqinisekisoamandla enkqubo yonke.
Iphaneli enkulu yi-120x60cm, ubunzima be-10.5kg kuphela, enokuthi iphakanyiswe kwaye imiswe ngumntu omnye kuphela, ayifuni i-crane kwisayithi.Yenza ukuthutha kunye nokukhwabanisa kwi-site kube lula, ngakumbi xa kuthelekiswa neefomworks zendabuko ezenziwe nge-aluminium. okanye iinkuni.Ukukhanya kukwanegalelo kukhuseleko olukwinqanaba eliphezulu lendawo yokusebenza.
Pinkqubo ye-lastic formworkakufuneki ukusika kunye nezikhonkwane ngenxa yobukhulu obahlukeneyo,kwaye phantse akufuneki iinkuni, imathiriyeli inokuphinda isetyenzisweemva kokwaphulwa, akayi kungcolisa imo engqongileyo.Ngokusebenzausebenzisa, ikona yeepaneli kulula ukwaphuka ngokwentelekisoxa kuthelekiswa nephaneli ngokwayo, imodyuli yethu yefomworkube neekona ezi-4 ezincinci eziza kutshintshwa ngokwahlukeneyo,yenza iiphaneli zingaphinda zisetyenziswe malunga namaxesha angama-100.
Izinto eziphathekayo zeimodyuli formworkyi PP (polypropylene)ixutywe nemicu yeglasi ekhethekileyo eyenza iiphaneli ukubaubambe uxinzelelo oluphezulu.
Izibambo zenziwe ngamandla aphezulu eNilon, ipaneli nganyeitshixiwe ngeziphatho ezi-4 ubuncinane, nto leyo eyenza inkqubo yonkeyomelele ngokwaneleyo ukugalela iindonga ezingama-40cm.
iindonga kunye neekona
Ukusebenzisa i-formwork yemodyuli, kunokwenzeka ukugalela ukuya kuma-40cm ubukhuluneendonga ezithe tye eziimitha ezi-3 ngaxeshanye.
Ukudibanisa neekona ezikhethekileyo kunye neepaneli zembuyekezo, kuneneIindonga ze-angle, iindlela ezintathu ze-T-endonga kunye neendlela ezine zokuwela zingabayenziwe lula.
Ubunzima obuphantsi kunye nemodyuli yefom yemodyuli iyayenzailungele iindonga zocingo njengoko kunokwenzeka ukuhambisa i-gangforms ezinkulungesandla.
izitya kunye neelevator shafts
Ubunzima obuphantsi beiplastiki yemodyuli formworkyenza lula iukugalelwa kwamatanki, izitya kunye namadama okuqubha ngaphakathiiindawo ezinofikelelo olulinganiselweyo okanye olungekhoyo kwizixhobo ezinzima.
Imodyuli yefomwork ikwalungele iishafti zeelevator njengayoinokusebenzisa ngaphandle koncedo lwecrane, inokwenza lula,umsebenzi okhawulezayo nochanekileyo ngesandla.
iingcango kunye neefestile
Ukwenza iingcango kunye neefestile ngokusebenza kweemodyuliilula, ngokufaka ngaphakathi kwi-formwork umthiisakhelo esihambelana nobukhulu bokuvulwa okufunekayo,uze ugalele iindonga ngeengcango neefestile.
Iphaneli yekholamu, iphaneli yokuvala imodyuli yentsika
Iphaneli yekholamu yiphaneli yokuvala imodyuli, eyenziweyeplastiki yePP echasene nefuthe eliphezulu, ukwenzela ikhonkrithi eyomeleziweyoiikholamu, iminqwazi yeentloko kunye neendonga.Iiphaneli zenziwe ngobunjineliukudibanisa okanye ngethogonally kwiindawo ezahlukeneyo, ukudala"Inkwenkwezi" -ifomu yobungakanani obuguquguqukayo.
Iiphaneli zekholomu zidibene kusetyenziswa umgangathoimiqheba yokutshixa inayiloni.Iphaneli nganye iya kufuna iziphatho ezili-9.
Ubuso obubumbayo bunemiqolo emi-6 ehambelanayo yokulungisa imingxumavumela udibaniso lwe-orthogonal lweephaneli "kwinkwenkwezi"ukumila.Imiqolo ibekwe kumgama 100/50mm leenye ukusuka kwenye, ivumela ukwenziwa kwesikwere kunye/okanyeiintsika zoxande ngecala le-150 ukuya kwi-600mm
Kukho uluhlu lwemingxuma phakathi kweepaneli zeukudlula kweentonga zokubopha.Indawo yemingxumai-asymmetric ukuphepha ungquzulwano phakathi kweentonga zokuwela.
Yonke imingxuma engasetyenziswanga ivalwe ngeeplagi.
Ikholamu ye-3m ubude yenziwe ngeepaneli zekholamu eziyi-16x,8 x qhina iintonga, 16 x iwasher, 144 x izibambo, 4 intsimbi nkqoimivalo yokuqinisa.
uqwalaselo lodonga lwekona
Uqwalaselo lodonga lwe-T
I-Fengqi Rd, iSithili saseYinzhou, isiXeko saseNingbo, eZhejiang, eTSHAYINA
Iprojekthi yodonga lwamakhethini e-Aluminiyam kwi-A...
21,04,22Juni 16, 2017
Iitoni ezili-100 ezivaliweyo kwiphepha ledekhi yentsimbi ...
16,02,22Juni 16, 2017
Kutheni inkxaso yensimbi isetyenziswa ngokubanzi
11,01,22Juni 16, 2017
Indima yefomwork kwi-architecture
28,12,21Juni 16, 2017
Imvelaphi kunye nophuhliso lweAluminiyam ceili...
30,11,21Juni 16, 2017
© Copyright 20102021 : Onke Amalungelo Agciniwe.
Plastic Formwork For Column, Amacandelo e-Scaffolding eRinglock, Izahlulo zesikafula esinemisonto yeBase Jack, Kwikstage Scaffolding Accessories, Ikhonkco le-Ringlock scaffolding Bracket, I-Scaffolding Adjustable Screw Jack,
iveliso ezifakiwe - Imephu yesiza